Tena Yehowa “Bon Kɛse” no Mu | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Yehowa befi adi ne aman no akɔko sɛnea ɔkoe ne koda no.” —SAK. 14:3.
“Ngodua bepɔw” a emu paee no kyerɛ dɛn”?
“Bon kɛse” no gyina hɔ ma dɛn? Yɛbɛyɛ dɛn atena mu?
Dɛn ne “nkwa nsu” no, na henanom na wɔbɛnom?
1, 2. Ɔko paa bɛn na ɛrebobɔ ba? Dɛn na Onyankopɔn asomfo bɛyɛ saa bere no?
ASƐM bi sii October 30, 1938 wɔ United States. Na nnipa mpempem pii retie radio so agoru bi. Wɔn a wɔredi agoru no kae sɛ nnipa bi fi okyinnsoromma a wɔfrɛ no Mars so rebɛsɛe asase no. Na wɔde ato gua sɛ ɛyɛ agoru bi kɛkɛ, nanso bere a nnipa pii tee no, na wosusuw sɛ ɛyɛ asɛm pa ara, enti ehu kaa wɔn. Nkurɔfo yɛɛ nea wobetumi biara sɛ wɔbɛbɔ wɔn ho aguaa.
2 Seesei yenim sɛ ɔko paa bi rebobɔ ba. Nanso nnipa pii abubu nnua agu wɔn asom; ayɛ sɛ wɔntee ho asɛm koraa. Eyi yɛ ɔko a Onyankopɔn ankasa aka ho asɛm wɔ Bible mu, na ɛnyɛ radio so agoru bi. Wɔfrɛ ɔko no Harmagedon. Ɛyɛ ɔko a Onyankopɔn de bɛsɛe wiase bɔne yi. (Adi. 16:14-16) Onyankopɔn asomfo a wɔwɔ asase so renko bi, na mmom wɔbɛtena hɔ ahwɛ sɛnea Yehowa bɛkeka ne ho ada ne tumi kɛse adi na wagye wɔn anwonwakwan so.
3. Nkɔmhyɛ bɛn na yebesusuw ho? Dɛn nti na ɛfa yɛn ho nnɛ?
3 Nkɔmhyɛ bi wɔ Sakaria ti 14 a ɛma yehu Harmagedon ko no ho nsɛm pii. Wɔkyerɛw nkɔmhyɛ no bɛyɛ mfe 2,500 ni, nanso ɛfa yɛn ho nnɛ. (Rom. 15:4) Nkɔmhyɛ no mu nsɛm pii ma yehu nea ɛbɛto Onyankopɔn nkurɔfo fi 1914. Saa bere no na Kristo fii ase dii ade wɔ soro. Bio nso ɛma yehu nsɛm a ebesisi nnansa yi ara. Nkɔmhyɛ no ka “bon kɛse” ne “nkwa nsu” bi ho asɛm. (Sak. 14:4, 8) Yebehu nea bon no kyerɛ ne sɛnea ɛbɔ Yehowa asomfo ho ban. Bio, yebehu nea nkwa nsu no kyerɛ ne sɛnea ebetumi aboa yɛn. Afei nso, sɛ yehu nea nkwa nsu no betumi ayɛ ama yɛn a, yɛn kɔn bɛdɔ sɛ yɛbɛnom. Enti momma yɛnyɛ aso ntie nkɔmhyɛ no.—2 Pet. 1:19, 20.
“YEHOWA DA” NO FI ASE
4. (a) Bere bɛn na “Yehowa da” no fii ase? (b) Afe 1914 nnya mmae koraa no, dɛn na na Yehowa asomfo aka? Dɛn na wiase atumfoɔ yɛe wɔ ho?
4 Sakaria ti 14 fi ase sɛ ‘Yehowa da bi reba.’ (Monkenkan Sakaria 14:1, 2.) Ɛyɛ da bɛn? Ɛno ara na wɔfrɛ no “Awurade da” no. Saa da no fii ase 1914 bere a wɔde Mesia Ahenni no sii hɔ wɔ soro no. Saa bere no, “wiase ahenni” bɛyɛɛ yɛn “Awurade ne ne Kristo no dea.” (Adi. 1:10; 11:15) Bere a 1914 nnya mmae koraa no, na Onyankopɔn asomfo aka no pen sɛ “amanaman mmere a wɔahyɛ” no bɛba awiei saa afe no. Wɔkae sɛ wiase no bɛfa ɔhaw ne abɛbrɛsɛ mu. (Luka 21:24) Dɛn na amanaman no yɛe wɔ asɛm no ho? Wobuu nnua guu wɔn asom. Atumfoɔ no ne nyamesom akannifo no dii asɛmpakafo a wɔasra wɔn no ho fɛw, na wɔtaa wɔn mpo. Nanso nea na ɛsɛ sɛ wiase atumfoɔ no hu ne sɛ Kristofo a wɔasra wɔn no yɛ “ɔsoro Yerusalem” anaa Mesia Ahenni no ananmusifo, enti sɛ wodi wɔn ho fɛw a, na ade nyinaa so Tumfoɔ Onyankopɔn no ankasa na wɔredi ne ho fɛw.—Heb. 12:22, 28.
5, 6. (a) Sakaria kae sɛ amanaman no bɛyɛ Onyankopɔn nkurɔfo dɛn? (b) Ɛhefo na Sakaria kae sɛ ‘wɔbɛka’?
5 Sakaria kaa nea amanaman no bɛyɛ. Ɔkae sɛ: “Wɔbɛfa kurow no.” Saa “kurow” yi ne Yerusalem, na egyina hɔ ma Onyankopɔn Ahenni a Mesia no di so no. Mesia Ahenni no wɔ ananmusifo wɔ asase so. Bible frɛ wɔn “ɔman mma.” Eyinom ne Kristofo a wɔasra wɔn a wɔda so wɔ asase so no. (Filip. 3:20) Bere a Wiase Ko I gyina mu no, ‘wɔfaa kurow no,’ kyerɛ sɛ wɔkyeree Yehowa ahyehyɛde no fã a ɛwɔ asase so no mpanyimfo. Wɔde mpanyimfo no koguu afiase wɔ Atlanta, Georgia, U.S.A. Atamfo teetee Kristofo a wɔasra wɔn yi yɛɛ wɔn aninyanne, wɔbaraa wɔn nhoma, na wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔde wɔn nsa bɛto wɔn asɛnka adwuma no so. Enti yɛbɛka a, na ‘wɔrefow kurow no mu adan,’ kyerɛ sɛ nkaefo no agyapade.
6 Atamfo tuu wɔn ani sii Onyankopɔn nkurɔfo so na wɔsɛee wɔn din, nanso wɔantumi ansɛe nokware som. Sakaria kae sɛ ebinom ‘bɛka.’ Eyinom ne Kristofo a wɔasra wɔn no nkaefo a wodii nokware no. Saafo no amma kwan amma ‘wɔantwa wɔn amfi kurow no mu.’
7. Dɛn na Kristofo a wɔasra wɔn no ayɛ a yebetumi asua nnɛ?
7 Bere a Wiase Ko I baa awiei no atamfo maa Onyankopɔn nkurɔfo asom dwoo wɔn anaa? Dabi. Ɔtaa a Sakaria hyɛɛ ho nkɔm sɛ amanaman no de bɛba Onyankopɔn nkurɔfo so no kɔɔ so ara. (Adi. 12:17) Nea ɛkɔɔ so wɔ Wiase Ko II mu no si eyi so dua. Sɛ yɛhwɛ nokwaredi a Kristofo a wɔasra wɔn no de gyinaa wɔn nan so no a, ɛhyɛ yɛn nyinaa nkuran sɛ yɛmfa animia nnyina sɔhwɛ biara mu. Yɛn gyidi nti, yɛn abusuafo, yɛn adwumayɛfo, anaa yɛn sukuufo betumi asɔre atia yɛn na wɔadi yɛn ho fɛw. (1 Pet. 1:6, 7) Nanso baabi a Yehowa asomfo te biara, wɔasi wɔn bo sɛ ‘wobegyina pintinn,’ na wɔremma ‘wɔn atamfo nhunahuna wɔn.’ (Filip. 1:27, 28) Ɛnde, bere a wiase no retan yɛn no, ɛhe na yebenya abɔ yɛn ho aguaa?—Yoh. 15:17-19.
YEHOWA WƆ “BON KƐSE” BI
8. (a) Ɛtɔ da bi a, Bible de bepɔw gyina hɔ ma dɛn? (b) “Ngodua bepɔw” no gyina hɔ ma dɛn?
8 Yɛabehu sɛ “kurow no” anaa Yerusalem gyina hɔ ma ɔsoro Yerusalem. Sɛ saa na ɛte a, ɛnde na “ngodua bepɔw a esi Yerusalem anim” no nso gyina hɔ ma biribi. Bepɔw no gyina hɔ ma dɛn? Ɔkwan bɛn so na emu “bɛpae” abɛyɛ mmepɔw abien? Adɛn nti na Yehowa frɛ no “me mmepɔw”? (Monkenkan Sakaria 14:3-5.) Ɛtɔ da bi a, Bible de bepɔw gyina hɔ ma ahenni anaa aban. Afei nso Bible taa de Onyankopɔn bepɔw gyina hɔ ma ne nhyira ne n’ahobammɔ. (Dw. 72:3; Yes. 25:6, 7) Enti ngodua bepɔw a esi Yerusalem apuei fam no gyina hɔ ma Yehowa nniso, kyerɛ sɛ ɔno ne Otumfoɔ Pumpuni wɔ n’abɔde nyinaa so.
9. Ngodua bepɔw a emu paee no kyerɛ dɛn?
9 Nkɔmhyɛ no kae sɛ ngodua bepɔw a esi Yerusalem apuei fam no mu “bɛpae.” Eyi kyerɛ dɛn? Ɛkyerɛ nniso foforo bi a na Yehowa bɛhyehyɛ de adi dwuma titiriw bi. Saa nniso foforo yi ne Mesia Ahenni no, na Yehowa de ama Yesu Kristo sɛ onni so hene. Nniso abien no nyinaa yɛ Yehowa dea, ɛno nti na Yehowa frɛ mmepɔw abien no sɛ “me mmepɔw” no.—Sak. 14:4.
10. “Bon kɛse” a ɛda mmepɔw abien ntam no gyina hɔ ma dɛn?
10 Nkɔmhyɛ no ma yehu sɛ Yehowa nan si bepɔw no so. Bere a emu repae nyinaa na ne nan da so si so. Enti sɛ ɛpae ma ɛfã kodi atifi na ɛfã kodi anafo a, yebetumi aka sɛ Yehowa nan si mmepɔw abien so. Eyi bɛma “bon kɛse” bi abɛda Yehowa nan ntam. Dɛn ne “bon kɛse” no? Egyina hɔ ma Onyankopɔn ahobammɔ. Sɛnea nnipa tumi nya ahobammɔ wɔ mmepɔw abien ntam no, saa ara na Yehowa asomfo nya ahobammɔ wɔ ne nniso ne Mesia Ahenni no ase. Yehowa remma kwan mma obiara nsɛe nokware som da. Bere bɛn na ngodua bepɔw no mu paee? Emu paee 1914 bere a Amanaman Mmere no baa awiei na Mesia Ahenni no fii ase dii tumi no. Ɛnde, bere bɛn na Onyankopɔn asomfo fii ase guan kɔɔ “bon kɛse” no mu?
WOFII ASE GUAN KƆƆ BON NO MU
11, 12. (a) Bere bɛn na Onyankopɔn nkurɔfo fii ase guan kɔɔ bon no mu? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yehowa de ne basa a emu yɛ den no bɔ ne nkurɔfo ho ban?
11 Yesu bɔɔ n’akyidifo kɔkɔ sɛ: “Me din nti aman nyinaa bɛtan mo.” (Mat. 24:9) Efi 1914 a awiei bere no fii ase no, yɛn atamfo ama wɔn homene so. Wiase Ko I mu no, atamfo teetee Kristofo a wɔasra wɔn no, nanso wɔantumi antɔre wɔn ase. Afe 1919 no, wogyee Onyankopɔn nkurɔfo fii Babilon Kɛse anaa atoro som mu. (Adi. 11:11, 12) * Saa bere no na Yehowa nkurɔfo fii ase guan kɔɔ bon no mu, bon a ɛda Yehowa mmepɔw abien ntam no.
12 Efi 1919 reba nyinaa Yehowa abɔ n’asomfo ho ban wɔ wiase baabiara. Atumfoɔ baraa asɛnka adwuma no ne Yehowa Adansefo nhoma wɔ aman pii so. Yɛreka yi mpo, wɔabara yɛn adwuma no wɔ aman bi so. Nanso nea wɔbɛyɛ biara wɔrentumi ntu nokware som ase da! Yehowa de ne basa a emu yɛ den no bɛbɔ ne nkurɔfo ho ban.—Deut. 11:2.
13. Yɛbɛyɛ dɛn atena Yehowa “bon kɛse” no mu? Adɛn nti na ɛnnɛ paa na ehia sɛ yɛtena bon no mu?
13 Sɛ yɛde yɛn ho fam Yehowa ho na yeso nokware no mu denneennen a, ɔne ne Ba Yesu Kristo bɛbɔ yɛn ho ban. Onyankopɔn remma onipa anaa biribiara ‘nhwim yɛn mfi ne nsam.’ (Yoh. 10:28, 29) Yehowa ayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn ma yɛabrɛ yɛn ho ase ahyɛ ne nniso ne ne Ba no nniso ase. Seesei a ahohiahia kɛse no rebobɔ ba no na yehia ne mmoa paa. Enti ɛnnɛ ne bere a ehia sɛ yɛkɔ so tena Yehowa “bon kɛse” no mu.
YEHOWA “KODA NO” REBA
14, 15. Da a Onyankopɔn ne n’atamfo bɛko no, dɛn na ɛbɛto wɔn a wonni “bon kɛse” no mu no?
14 Bere a wiase bɔne yi reba awiei no, yɛhwɛ kwan sɛ Satan nsa bɛyɛ den wɔ Yehowa asomfo so. Ɛrenkyɛ Satan bɛtow ne twɛre a etwa to. Afei Yehowa bɛkeka ne ho na wasɛe n’atamfo nyinaa. Saa da no na Sakaria frɛ no Yehowa “koda.” Ɛda no, Otumfoɔ Pumpuni Yehowa bɛma ne homene so na wada ne ho adi sɛ Ɔkofo Nuonyamfo. ‘Ɔkoda’ yi bɛsen ɔkoda a atwam biara.—Sak. 14:3.
15 Onyankopɔn koda no fi ase a, dɛn na ɛbɛto wɔn a wonni “bon kɛse” no mu? Nkɔmhyɛ no ka sɛ “hann biara remma” wɔn so. Nea eyi kyerɛ ne sɛ wɔrennya Onyankopɔn anim dom. Nkɔmhyɛ no daa no adi sɛ “ɔpɔnkɔ ne afurumpɔnkɔ ne yoma ne afurum ne afieboa biara” ‘bɛkyenkyen.’ Eyi kyerɛ sɛ amanaman no akode nyinaa bɛyɛ kwa, wɔrentumi mfa nyɛ hwee. Yehowa besum yare ne “ɔhaw” agu n’atamfo so. Sɛ ɛyɛ yare paa oo, sɛ nso kasakoa oo, yɛrentumi nkyerɛ. Nea yenim ne sɛ ɔhaw no bɛma n’atamfo abɔ nnyennyan. Saa da no, ‘wɔn ani ne wɔn tɛkrɛma bɛporɔw,’ kyerɛ sɛ, atamfo renhu hwee, enti wɔbɛto afom; na wɔde krado bɛto wɔn ano, wɔbɛyɛ dinn. (Sak. 14:6, 7, 12, 15) “Asase so ahene ne wɔn asafodɔm” nyinaa bɛkɔ akodi Satan afã. Nanso asɛm no ne sɛ, baabi a wɔhyɛ biara wɔbɛsɛe wɔn. (Adi. 19:19-21) “Wɔn a Yehowa bekunkum wɔn saa da no begugu hɔ fi asase ano akɔpem asase ano.”—Yer. 25:32, 33.
16. Bere a Onyankopɔn koda no rebobɔ ba yi, nsɛmmisa bɛn na ɛsɛ sɛ yesusuw ho? Dɛn na ebehia sɛ yɛyɛ?
16 Sɛ ɔko ba a, ɛka obiara. Wɔn a wobedi nkonim mpo nya wɔn de. Aduan kɔ atwee. Amamfo agyapade sɛe na ahokyere ba baabiara. Ahofadi a nnipa wɔ fi wɔn nsa. Sɛ biribi saa to yɛn a, dɛn na yɛbɛyɛ? Yɛbɛbɔ hu anaa? Yɛn abam bebu ma yɛagyae Yehowa som? Kae sɛ ahohiahia kɛse no mu mpo na ehia sɛ yɛma yɛn gyidi yɛ den na yɛtena Yehowa “bon kɛse” no mu na yenya anidaso sɛ obegye yɛn!—Monkenkan Habakuk 3:17, 18.
“NKWA NSU BƐTENE”
17, 18. (a) Dɛn ne “nkwa nsu” no? (b) “Apuei po” ne “atɔe po” no gyina hɔ ma dɛn? (d) Dɛn na woasi wo bo sɛ wobɛyɛ?
17 Harmagedon akyi no, “nkwa nsu bɛtene” afi Mesia Ahenni no mu. Dɛn ne “nkwa nsu” no? Egyina hɔ ma nea Yehowa ayɛ a ɔde gye nkwa. Sakaria nkɔmhyɛ no kaa “apuei po” ne “atɔe po” ho asɛm. “Apuei po” no gyina hɔ ma Po a Awu, na ɛkyerɛ nnipa a wɔwɔ adamoa mu. “Atɔe po” no nso gyina hɔ ma Mediterranea Po. Saa po yi de, nkwa wom, na ɛkyerɛ “nnipakuw kɛse” a wobetwa Harmagedon. (Monkenkan Sakaria 14:8, 9; Adi. 7:9-15) Wobegye akuw abien yi nyinaa afi owu a Adam kɔfa bae no mu. Afei wɔbɛnom “nkwa nsu,” “nkwa nsu asubɔnten” no.—Adi. 22:1, 2.
Si wo bo sɛ wobɛtena Yehowa “bon kɛse” no mu
18 Yehowa bɛbɔ yɛn ho ban ma yɛatwa wiase bɔne yi akɔ wiase foforo a trenee wom no mu. Ɛwom, amanaman no tan yɛn, nanso momma yensi yɛn bo sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ Onyankopɔn Ahenni no ase na yɛatena Yehowa “bon kɛse” no mu.
^ nky. 11 Hwɛ Adiyisɛm—N’awiei Koraa Abɛn! nhoma no kratafa 169-170.